४ दिने सूचना प्रविधि मेलामा के के छन् ? « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित
४ दिने सूचना प्रविधि मेलामा के के छन् ?
२४ भाद्र २०७३, शुक्रबार ०४:११
काठमाडाै २४ भदाै ।आधा दर्जन कप्पनीले बिभिन्न सेकुरिटी डिभाइसहरूलाई प्रदर्शनीमा राखेका छन् । सिसी टिभी क्यामेरा, डिजिटल एटेन्डेन्स मेसिन, सेकुरिटी स्कानर जस्ता सुरक्षा प्रविधिको मेलामा हाबी छ ।कमटेकमा शिर्ष प्रायोजक सुबिसुले क्लियर टिभि तथा ईन्टरनेट सेवामा विशेष आकर्षक योजना ल्याएको छ । यसै गरि एशोसिएट स्पोन्सर सामसुङले नेपालका लागि J-Series का फोनहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्रकाशित : २४ भाद्र २०७३, शुक्रबार ०४:११